တက္ကစီ LED မျက်နှာပြင်
V1 Taxi ထိပ်တန်း LED မျက်နှာပြင်
V2 ကားအမိုး LED မျက်နှာပြင်
ပြင်ပ 3D ကြော်ငြာ LED ...
အလင်းလွန်ကဲပြီး ပါးလွှာသော ရှေ့နှင့်နောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Fire-Proof...
ကားခေါင်မိုး LED Di...
စွမ်းအင်ချွေတာသော PC Matte Cover သည် အလွန်ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးလွယ်ကူသော ထည့်သွင်းမှု...
Virtual အတွက် HD LED Display...
High Contrast Ratio 6000:1 High Refresh Rate 7680Hz High Grey...
Future Growth Point ဘယ်မှာလဲ...
ယနေ့ခေတ်တွင် LED display လုပ်ငန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဆက်လက်ပြင်းထန်လာသည်။အောက်မှာ...
လေးစားအပ်ပါသော မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ်များ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံး ၊ 2022 ခုနှစ် နဂါးလှေတော်ပွဲတော်သည် အကျုံးဝင်ပါသည်...
Steel Structure အများအားဖြင့် Outdoor LED Display များသည် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး အများစုမှာ ထည့်သွင်းကြသည်...
နှစ်စဉ် မေလ 20 ရက် နှင့် မေလ 21 ရက်နေ့ သည် အင်တာနက် ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်သည်။520 သည် h...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဖျော်ဖြေရေးစီးပွားရေး ထွန်းကားလာမှုနှင့်အတူ ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ...
ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ တက်သစ်စ ...
ရုပ်ရှင်လောကကို မွေးဖွားလာချိန်မှစ၍ ပရိုဂရမ်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများသည် စံနမူနာပြကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အရည်အသွေးကောင်း ပြင်ပကို ဘယ်လိုဝယ်မလဲ...
ပြင်ပကြော်ငြာ LED မျက်နှာပြင်သည် အလွန်အသုံးများသော LED display အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဒါတင်မကဘူး...
နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အထွေထွေရုံး၏ စည်းကမ်းချက်များအရ တိုင်းဒေသ...
LED Display အဖြစ်များသော ပြဿနာများ...
LED Display မျက်နှာပြင်ကို ယခုအခါ မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာပါသည်။လေးလေးနက်နက်ချစ်တယ်...
LED မီးလုံးတွေက ဘာကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ...
1. Viewing Angle LED display ၏ မြင်ကွင်းထောင့်သည် t viewing angle ပေါ်မူတည်ပါသည်။
SRYLED မိုးလုံလေလုံ LED ဖန်သားပြင်ကို ဘုရားကျောင်း၊ အစည်းအဝေးခန်း၊ 90 ဒီဂရီကော်လံနှင့် ရုပ်ရှင်ရုံစသည့် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ပရိသတ်ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်နှင့် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း အရောင်ရှိသည်။
SRYLED အဆင့်ရှိ LED မျက်နှာပြင်သည် ပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် လွယ်ကူသည်။LED panel တစ်ခုသည် 10 စက္ကန့်အတွင်း တပ်ဆင်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စင်မြင့် LED မျက်နှာပြင်အားလုံးတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် မြင့်မားသော refresh rate အနည်းဆုံး 3840Hz ရှိသည်။